अस्वभाविक सम्पत्ति रहेको भन्दै दुर्गा प्रसाई सहित चार मेडिकल कलेज सञ्चालकको सम्पत्ति छा’नविन ! – ईमेची डटकम
अस्वभाविक सम्पत्ति रहेको भन्दै दुर्गा प्रसाई सहित चार मेडिकल कलेज सञ्चालकको सम्पत्ति छा’नविन !
चितवन – । निजी मेडिकल कलेजका सबै सञ्चालकहरु सम्पत्ति सु’द्धिकरण बिभागको छा’नविनमा परेका छन । सवै मेडिकल कलेजका सञ्चालकसँग अ’स्वभाविक सम्पत्ति देखिएपछि बिभागले छान’विन अघि बढाएको हो। विद्यार्थीसँग अ’वै ध ढंगले लाखौँ रुपैया उठाएको उजुरीका आधारमा सञ्चालकको सम्पत्ति स्रोत हेर्दा अ’स्वभाविक पाइएकोले छा’नविन अघि बढाइएको बिभाग स्रोतले बताएको छ ।
अतिरिक्त शुल्कबाहेक पनि उनीहरूले अ’स्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति जोडेको उजुरी परेपछि बिभागले सबैको सम्पत्तिको स्रोत खोजिरहेको हो । बिभाग स्रोतका अनुसार पहिलो चरणको अनुसन्धानमै विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक सुनील शर्माले अस्वाभाविक सम्पत्ति आर्जन गरेको तथ्य खुलेको छ। यस्तै झापामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीमा रहेका बी एन्ड सी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको सम्पत्तिको स्रोतसमेत वै’ध नदेखिएको छ ।
दुवै मेडिकल कलेजका सञ्चालक माथि सूक्ष्म ढंगले छा’नबिन भइरहेको बिभागले जनाएको छ । यस्तै नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारी र अध्यक्ष जैनुद्दिन अन्सारीको सम्पत्तिमाथि पनि छानबिन भइरहेको छ । उनीहरूको लगानीको स्रोत नै शंकास्पद रहेको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो । सम्पत्ति सुद्धिकरण बिभागले गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्यालमाथि पनि छानविन गरिरहेको छ ।
अर्यालले एक करोड ७३ लाख ठगी गरेको भन्दै विद्यार्थीले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि प्रहरीले मु’द्दा नै दर्ता गरेर कारबाही अगाडि बढायो । गत वैशाखमा १७ लाख धरौटीमा अर्याल रिहा भएका थिए । प्रहरीमा उजुरी गर्ने विद्यार्थीले अर्याल वि’रुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा समेत उजुरी दिएका थिए । त्यसैका आधारमा उनीमाथि पनि विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । जनता टाईम्सवाट साभार